Huawei Band2သည်ကြံ့ခိုင်သည့်လက်ကောက်၏အနှစ်သာရကိုပြန်လည်ရရှိသည် Gadget သတင်း
Huawei Band2သည်ကြံ့ခိုင်မှုလက်ကောက်၏အနှစ်သာရကိုပြန်လည်ရရှိသည်
ဟိုဆေး Alfocea | | Wearable devices များ
နောက်ဆုံးတွင်တရုတ်နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ Huawei သည် ၄ ​​င်း၏ quantitative bracelet အသစ်ဖြစ်သော Huawei Band2ကိုတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်။ တစ် ဦး ထက်ပိုသောရိုးရာနှင့်သမားရိုးကျဒီဇိုင်းကိုပြန်သွားပါထုတ်ကုန်အမျိုးအစားမည်သို့ဖြစ်သင့်သည်ဆိုသည့်အချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပို၍ ဖြစ်နိုင်သည်။
ဒီကိရိယာ၏ပထမမျိုးဆက်ပြီးနောက်စမတ်နာရီနှင့်စမတ်ဘန်းတို့အကြားပုံစံတစ်မျိုးဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည့်နောက် Huawei သည်ဤဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကိုသူတို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုနှင့်အချို့သောကျန်းမာရေးအခြေအနေများကိုထိန်းချုပ်လိုသောသုံးစွဲသူများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကား၊ Huawei Band2သည်အသွင်အပြင်နှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုအားဖြင့်ယခင်ကထက်ပိုမို Fitbit ဖြစ်သည်.
Huawei Band2သည်မူလအစသို့ပြန်သွားသည်
Huawei Band2နှင့် Band2Pro အသစ်တို့သည် quantizer wristbands ကိုအသုံးပြုသူများအလိုရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။ စမတ်နာရီနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးတီးဝိုင်းတစ်ခုအကြား၊ နံပါတ် ၎င်းသည်သမားရိုးကျသဘောအရကြံ့ခိုင်သောလက်ကောက်ဖြစ်သည်နှင့်အယူအဆပင်ရိုးရာ။
Fitbit သည်စျေးကွက်တွင်ယင်း၏အရေးပါမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အခက်အခဲရှိပုံရသည့်အချိန်တွင်၊ လက်ပတ်နာရီများကိုတိုင်းတာသည့်အချိန်တွင်စမတ်နာရီများထက်ပိုမိုဆွဲဆောင်အားကောင်းနေသည်။ Hubiti သည် Fitbit မှဆုံးရှုံးသွားသောဈေးကွက်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုရယူလိုခြင်းဖြစ်နိုင်သည် Huawei Band2နှင့်2Pro လက်ကောက်များကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း Huawei Band ၏ဒုတိယမျိုးဆက်ဖြစ်သည် တကယ်သူတို့ရဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်နှင့်ဤအတွက်၊ အားကစားသက်သောင့်သက်သာသက်တောင့်သက်သာရှိသည့်ဒီဇိုင်းအပြင်၊ hardware သည်လက်ကောက်တစ်ခုဖြစ်သည့် Band2၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပုံရသည်။ Huawei ၎င်းတွင်ထူးခြားသောလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များရှိသည် -
Un 24/7 နှလုံးခုန်နှုန်းအာရုံခံကိရိယာ.
၁၀၀ mAh ဘက္ထရီတစ် အထိ 21 ရက်၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်.
Pro မော်ဒယ်ပေါ်ရှိ GPS ။
လုပ်ဆောင်ချက် VO2 မက်စ် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စဉ်အတွင်းအောက်စီဂျင်သုံးစွဲမှုကိုတိုင်းတာသည် (Pro version သာ)
အရောင်သုံးမျိုး (အပြာရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်နှင့်အနီရောင်) နှင့်အရွယ်အစား ၁၁၄.၆၇ မီလီမီတာ x ၁၀၁.၃၅ မီလီမီတာအရကျွန်ုပ်တို့သည်ရရှိနိုင်မှုနှင့်စျေးနှုန်းအသေးစိတ်ကိုမသိရှိရသေးပါ။ Huawei Band2နှင့်2Pro။ ဒါပေမယ့်ငါတို့သိတာကသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးပါ Android နှင့် iOS ထုတ်ကုန်များနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့က Android 4.4 သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းနှင့် 8.0 သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းတွင်အသီးသီး run နေသမျှကာလပတ်လုံး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » Wearable devices များ » Huawei Band2သည်ကြံ့ခိုင်မှုလက်ကောက်၏အနှစ်သာရကိုပြန်လည်ရရှိသည်
ယခုအချိန်တွင် GIF ကို fecal bacteria DNA တွင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်
Moto G5S Plus ၏ယိုစိမ့်မှုကသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပုံရိပ်အသစ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသသည်